Heart Museum: How beautiful is Mandalay!
How beautiful is Mandalay!
“This is where my family and my friends grew up with me...
So I'll cross the sky and sail the sea...
To be where I wanna be”
မန္တလေးသား(MDY Thar)တယောက်ရဲ့ လက်စွမ်းပြ မန္တလေးဝန်းကျင် အလှ
Posted by Heartmuseum at 3:30 PM
Labels: လှသော ရှုခင်း ၊ ချစ်သော မန္တလေး
ပုံတွေကြည့်ပြီး မန္တလေးကို လွမ်းတယ်ဗျာ..
မန္တလေးသူ တစ်ယောက်က လွမ်းလွမ်းနဲ့ကြည့်သွားကြောင်းပါ
မန္တလေးကို ငယ်ငယ်လေးတုန်းကပဲ ရောက်ဖူးပြီး ကြီးမှ တခါမှထပ်မရောင် ဖြစ်တော့ဘူး။ တကယ်ကို ထပ်သွားချင်ပါတယ် ကိုအညတရရေ... ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Oh yeah.. how beauty is Burma :) Happy New Year Heart Gyi.... You may findanew watch in this new year.. :P
ကိုဟ လည်းထပ်တူ ပျော်ရွှင်ပါစေ
Heart museum (ခ)ကိုည......ရေ
မန္တလေးမြို့ တောင်ရိပ်ခိုမယ် ကိုကိုရယ်
စိန်ပါတီလာရင် မောင်တို့ကြို စိတ်ရွှင်လန်း
သြော် မြို့တော်ကြီးရဲ့ လေးမျက်နှာမှာဖြင့်
တိမ်ပန်း တိမ်ညို သာယာရွှေပြည်စို
ှဗာရာဏသီပြည်လို မြန်းကြမြေကို ဆန်းရ ရွှေဗဟို နန္ဒာရေညိုသန်း မန်းရိပ်ခို
မှိုင်းပြာပြာ မှုန်ဝေေ၀ ရေဇလာနဒီမြစ်ညို